खुसीको खबर – कोरोना भाइरस वि’रुद्व ९५ प्रतिशत प्रभा’वकारी मानिएको अर्को खोप आयो…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
एजेन्सी : कोभिड १९ वि’रुद्धको खोप विकासमा जुटिरहेका वैज्ञानिकहरुलाई थप सफलता मिलेको छ । अमेरिकी कम्पनी मोडर्नाले विकास गरिरहेको खोप ९५ प्रतिशत प्रभा’वकारी भएको विकासकर्ता कम्पनी मोडर्नाले जनाएको छ ।
बीबीसीका अनुसार, मोडर्नाले ‘महान’ दिन भन्दै प्रयोगका लागि अनुमति लिन केही सातामै आवेदन दिने बताएको छ । उक्त खोप अमेरिकामा तीस हजार जनालाई दुई डोज चार साताको अन्तरमा दिइएको थियो । तर, यसले कति लामो प्रति’रोधी क्षमता कायम राख्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन् ।
कोभिड खोप विकास र यससम्बन्धी अनुसन्धानका लागि मोडर्नालाई अमेरिकी सरकारले १ विलियन डलरको कोष प्रदान गरेको छ । कम्पनीले १० करोड डोज भ्या’क्सिन उपलब्ध गराउन लागि साढे १ विलियन डलरको सम्झौता समेत गरिसकेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा थप ५ सय १ जनामा संक्रमण, कुल संक्रमित ९९ हजार नाघ्यो !
काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५ सय १ सं’क्रमित फेला परेका छन् । जस्मा २ सय १२ महिला र पुरुष २ सय ८९ रहेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ५ सय १ संक्र’मित थपिएका हुन् । योसंगै काठमाडौ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या ९९ हजार ३ सय ५९ पुगेको छ ।
योसंगै काठमाडौंमा ७८ हजार ६ सय ५०, जना, ललितपुरमा ११ हजार ३ सय ७९, भक्तपुरमा ९ हजार ३ सय ३० जना संक्रमित पुगेका छन् ।काठमाडौं उपत्यकामा निको हुनेको संख्या ७९ हजार २५ र स’क्रिय संक्र’मितको संख्या १७ हजार ६ सय ७१ पुगेको छ ।
Prevजनता समाजवादीले फिर्ता गरेन सांसदहरूको दसैं भत्ता !
Nextमुख्यमन्त्री पोखरेल र सुर्य थापा लाई मन्त्री पुनको जवाफ प्रचण्डको लिखित प्रस्ताव आउँदा किन उत्तेजित र छट्पटी ?
काठमाडौं–तराई मधेस द्रु’तमार्ग निर्माण समय सीमाभित्रै सकिन्छ – सेना…हेर्नुहोस् ।
बाबुराम पनि नेकपामा जाँदैछन् ? गरे यस्तो सनसनीपूर्ण खुलासा…हेर्नुहोस् ।